Ukuphupha koMfokazi Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Liphupha lini lomphambukeli elibuyela kulo? Yintoni umfokazi azama ukuyibonisa? Xa utolika iphupha, kubaluleke kakhulu kungekuphela ukuba ujonge uphawu lwephupha uqobo, kodwa kufuneka kufakwe iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Iimvakalelo xa ulele nazo zinokudlala indima.
1 Uphawu lwephupha «uMphambukeli» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uMphambukeli» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Alien» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uMphambukeli» - ukutolikwa ngokubanzi
Iphupha lomphambukeli linokuthi, ngokuxhomekeke kutoliko jikelele lwephupha, libe yinto engaqhelekanga okanye encinci eyaziwayo Iindawo zobuntu bonisa ukuphupha. Umphuphi ubona ezi ndawo njengezingaqhelekanga okanye hayi ngokungqinelana nomfanekiso wakhe kuye el mundo yomlindo. Ngamanye amaxesha ezi zinokucinezelwa okanye zicinezelwe iindawo zobuntu. Umphuphi kufuneka ke azame ukuqonda nokwamkela obu buchule. Kuba nazo ziyinxalenye yobuntu bakhe.
Ukudibana okumangalisayo nomphambukeli ephupheni kufanekisela ukuba ukuphupha ebomini bokuvuka kungekudala kuyamvulela. Abantu abangaqhelekanga izakubetha. Kodwa ezi ziya kuba nefuthe elihle kubomi bakho, nokuba ungaya kuzo ngononophelo okanye mhlawumbi ungamkelwa. Umfokazi onobuhlobo njengophawu lwephupha uhlala evakalisa impilo enempilo kunye nentsapho emnandi.
Ukuba iphupha liziva lihlaselwa ngumphambukeli ephupheni lakho, kuya kufuneka uqaphele ukuba ufuna ukunqanda into kwihlabathi elivukayo. Kungenxa yokuba awunakuwuthemba lo mbandela. Ukuba iphupha ngokwalo lingumphambukeli wephupha, unokulindela ubuhlobo obuhlala buhleli kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «uMphambukeli» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha "uMphambukeli" ufuna ukuba umphuphi abe nolwazi kwinqanaba leengqondo lokutolikwa kwephupha ukuba ungomnye kubomi bokwenyani. Inxalenye yakhe iziva ingaqhelekanga okanye ayisiyiyo. Ngokombono wakhe, eli candelo alihambelani naye kwaye yiyo loo nto ezama ukulicinezela okanye ukulicinezela. Ke ngoko, iphupha likucela ukuba uzikhathalele kwaye ufikelele kwimvisiswano yangaphakathi. Kodwa uya kuphumeza oku kuphela ukuba unokwamkela zonke iinxalenye zobuntu bakho.
Ngokukodwa ukuba iphupha lizisa iimvakalelo ezingalunganga kumphambukeli ephupheni, kunzima kuye ukuba amkele isimilo sakhe esingaqhelekanga kwihlabathi lokuvuka. Iimvakalelo ezintle, nangona kunjalo, zibonisa ukuba iphupha lisendleleni elungileyo kwaye livulelekile kutshintsho olunokwenzeka.
Ukuba iphupha libona umfokazi ephupheni kunye ne-UFO, ukutolikwa kwengqondo kwephupha kulitolika njengophawu lwe iingcamango zokudalaukuba kungekudala uza kuphuhlisa iphupha. Nangona kunjalo, kufuneka ulumke ungaphambuki kwiinyani. Izimvo zakho kufuneka zibenakho ukukhula kwaye zisebenze.
Uphawu lwephupha «Alien» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya ubona kumqondiso wephupha "Alien" umqondiso wento ethile. Mal okanye ukuphazamisa kubomi bamaphupha.